Xog: ROOBLE oo ku gacan sayray mucaaradka, amray in doorashada lasii wado | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xog: ROOBLE oo ku gacan sayray mucaaradka, amray in doorashada lasii wado
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku gacan sayray dalabkii mucaaradka ee ahaa in la hakiyo doorashooyinka dalka, wuxuuna amray in lasii wado, sida ay ogaatay Dalkaan.com.
Dalkaan.com waxay shalay qortay in Rooble uu aqbalay baaqa mucaaradka ee ahaa in la isugu yimaado shir ku saabsan arrimaha doorashada, balse wuxuu doonayaa kaliya in lagu saxo khaladaadka jira, waxna looga qabto cabashada mucaaradka, mana u qorsheysna in doorashada la hakiyo.
Sida ay ogaatay Dalkaan.com, xubnaha Reer Woqooyiga iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa isku fahmay in lasii wado geediga doorashada oo aan la joojin.
Ciidamada Burundi oo dib ula wareegay Ceel Baraf
Maxay soo laabashada ciidanka Mareykanka ka bedeli kartaa dagaalka Al-Shabaab?
Ukraine oo war kasoo saartay duulaanka Ruushka iyo wararkii ugu dambeeyey
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay duqeymo cirka ah u geysteen xarumaha milatariga iyo saldhigyada ciidamada ilaaliyo xadka. “Ruushka si khiyaano...
Sawirro: Ra’iisul Wasaare ROOBLE oo dalab culus u gudbiyey…
Dulmigii ka dhacay Laascaanood. Dad Soomaali ah oo heyb ahaan loo...
Calaacalka Mid ka mid ah Guulwadayaasha Farmaajo Kadib markii uu Soo...
Col. Xamdi: Waxaan shaqada ugu tegay Yaasiin Farey oo aysan jirin...